OPDO keessa eenyufaatu jiraa -
Caalaa Abbaa Waadaa, Mudde 1, 2019
Barreeffama armaan gadii kana #waggaa3 dura dhuma bara 2016 waayee OPDO gaafasii /ODP hardhaa kan amma paartii #EPP tti baqe jedhamuu kana akkasitti barreessen ture. Yeroof namni hubatee fi dhiisee hin beeku,isallee kan nacaalaa akkaa diddiiganii beekumsa fagoo fi addaan uummataaf himaa turan baayyedha. Hundumaafuu Waan amma deemaa jiru kanaan duuba Obbo LAMMAA MAGARSAA garee kam keessatti ramadamu laata? Waan ani baras barreesse keessaaMaaltu dhugaa fi maaltu soba isin taajjabaa mee!
#OPDO ilaalchisee hubannoofi taajjabbii kiyya.
Barruu kana kanin barreessuuf dirqame namoota baayyee OPDO irraa waa eegan hedduu argaa waanin dhufeefi. Kanaafuu umrii kiyya xiqqaarraa hanga ammaattii waayee OPDO kanin taajjaben sinif qooda. Jalqabatti OPDO akka jaarmiyaatti laaluun dogongora tahuyyuu, hamma karaa kanaan (bifa jaarmiyaa qabateen) sabni keenyaa ittiin miidhamaa waan jiruuf mee jaarmiyaa haa jennuun. JALQABATTI MAALIF JAARMIYAA JECHUUN NUTTI ULFAATEE? isa jedhun gabaabsee deebisa.
Sababiin ani Jaarmiyaa jechuun maaf ulfaata jedhuuf
Namtichumti isaan bixxilateyyuu, #Mallasaan yeroo tokko akkas jedheenii ture, ” OPDO is not a demanding organization!” hiikan isaa, OPDO’n jaarmiyaa mirga namoomaaf falmuu miti jechuudha.
Akeekaa mataa isaani,kaayyoo fi muldhata namoota dhuunfaanillee tahee gareen walitti dhufan utuu hin taane murna addaati. kan silaa waan isaan maqaa OPDO moggaafatan kanaaf warra ijaaraman yookin ‘bixxilamanis’ miti. Jalqabatti akeekaa qaama biraa fiixa baasuf warra akka dhoqqeettii bukeeffamanii tolfaman, warra maalif jaarmiyaa aka tahanillee hin beekne garuu murna yookin nama qeenxee lubbuu ofii tursiifachuuf waan ajajaman raawwachuuf ajaja fudhatan waan tahaniif ulaagaa Jaarmiyaa jedhu hin guutan. Haa tahu malee harki hin muldhannes haa tahuu waan muldhatuun maqaa OPDO kana jedhuun sabni keenya miidhamaa waan jiruuf mee ‘JAARMIYAA’ haa jennee fudhannuutii, achi keessa namoota yookin murnoota akkamiitu jiraa? maalif achi seenanii? hardha hoo maal raawwachaa jiruu? isa jedhun gabaabinaan deebisa, Isin ana caalaa akka beektaniifi hubattan wallaalee mitiim,waluma yaadachiisuf malee…
OPDO keessa eenyufaatu jiraa?
Warra ganamuma bitamuufi ergamuu qofti hiree kiyya jedhanii sammuu isaanii amansiisan,kanneen gadaantummaan sammuu isaanii dhaalee kana of amansiisanii yeroo hundayyuu ‘HIN DANDEENYU’dhaan sammuun xaxame- gareen kuni qaamota olaanoo OPDO tahani ajaja TPLF akka waaqarraa dhufeetti hojiirra oolchanii dha.
warra diinummaa qaban, kan Oromoo irratti SHIRA ICCITAAWAA hojjachuuf qaamota murna tokkummaa Xoophiyaa tiksina jedhaniin , Oromoo gadaantummaa keessa tursiisna, Oromoon akka mataan ol hin jenne goona jedhanii ergama fi akeekaa kanaan OPDO tti miseensomanii gogaa hoolaa uffatanii (ergama OPDO’n jalqabayyuu bixxilamteef galmaan gahuuf)iddoolee furtuu tahan qabatanii of jalatti caasaa baldhaa fi baayyee diriirfataniidha. Garee kana keessa kan jiran(Oromoo sammuun habashoomee, Xoophiyaan bannaan baduu keenya jedhanii amanan, fincaan ilmaan Nafxanyootaa,kan garuu walakkaa dhiiga Oromoo qaban san gatanii walakkaa habashummaa sana caalchifatan, Habashoota Oromiyaa keessatti dhalatanii jibbiinsa Oromoo onnee saanii keessaa qaban, sabaafi sablammoota Oromiyaa keessatti dhalachuun karaa kamiinuu olaantummaa Oromoo arguu hin feene) dha. Gareen kuni qunnamtii sadi ykn lama qabu qaama isaanii olii waliin. Inni tokko warra xoophiyaa tiksina jechuun Amaarummaa leellisu waliin, inni tokkommoo kallattiidhaan TPLF yoo tahu kan hafanimmoo gareen jalqaba kaase san waliin hojjatu.
Garee ilmaan oromoo dhiigan qulqulluu tahanii sababoota adda addaaf seenanii dha. Gareen kunis garee 3 of keessaa qaba.Isaanis:-
warra OPDO malee furmaanni biraa hin jiru jedhanii dhaabicha waliin jiraachuufi dhaabicha tursiisuuf jecha seenanI, gareen kuni irra caalan isaanii akka waraabeessaa,” kan garaa malee kan maqaa,maaltu nu dhibe.” warra jedhanii dha. Hojii argachuuf, mana ijaarrachuuf, lafa argachuuf, waanuma akka carraalee gaarii jedhaman biyya san keessatti argaman hunda argachuuf dirqama OPDO tahuutu furmaata jedhanii warra ofitti dukkaneessanii dha.
Gareen kunimmoo garee Tarii seennee waa jijjiirraa laata? mee itti seennee haaromsinuu, humna taanuufii? jechuun seenan yoo tahu gareen kuni humnas tahee baayyina hedduu hin qaban. gareen kuni haala laallattotaafi haala kam keessattillee gaggaragaluu kan dandahii fi fakkeessuu kan dandahanii dha. Ergama kamuu fiixa baasuf, shirri isaanii irraa hedduu hin beekamu. sabboontota of fakkeessu, namoota hedduus qunnamu. Kana malee gareen kuni warra qabsoo Oromoo karaa hidhannoos tahee sabboonummaa Oromoo irraa abdii murateefi nuffii qabaniidha, irra Caalaan #Diyaasporaa Oromoo warri sabboonoo fakkaatanis tahee warri OPDO waliin ifattai hojjatan warra garee kana jala jiraniidha.( This group is very flexible and business minded warra tahanii dha),
Gareen inni dhumaa kunimmoo Sabboontota dhugaa, warra halkanii guyyaa aadaa, boohaa, dhibee Oromoon mankaraaraa jiraatanii dha. Gareen kuni dubbatus ni hidhama, dhiisus fayyaa dhaba. Gareen kuni kanneen warraa OPDO-wayyaneedhumaan jiruun golgolaahee, hojii isaanirraa ari’atamaa, hidhamaa, reebamaa, turuun jiruun hunduu harkaa badee, mee bubbulluu laata? mee tarii umrii keenya dheereffannuu laata? Biyya keenyarraa fagaannee, tanayuu dhabuurra asuma turree waan sabni keenya itti jiru waliin dhamdhamnuu laata? Ogummaa qabnuun illee waa hojjachaatuma turruu laata-MISEENSA ISAAN JEDHAN KANA TAANE? warra jedhanii dha. Gareen kuni ulaagaa argamettis fayyadamanii waan sabaa hojjachaatuma waldhaansoo hadhooftuu keessa jiranii dha. Garee kana akka laayyoon arguun rakisaa dha. of dhoksanii,callisaan dhibamaa waan jiraataniif. Gareen kuni garuu humna tahee dhageettii jaarmiyicha keessatti homaayyuu hin qaban. nama amanan waan hin qabneef qophxoomoo dha. Egaa garee akkasii Waaqni Oromoo umrii isaanii haa tusruun jedha. Hubannoon kiyya kana fakaataa-taajjabbiin kiyyas kanuma. Kan nacaalaa beektanis amala warra akanaa waliif qoodatii nama keenya irraa baraaraa!
Kambaa kambaa yaa qorqoorroo,
ormi xuqeet nama laalaa,
abbaatu dhoowwata roorroo.
← The Last Gasp of Ghosts of Feudal Ethiopia UN Free Speech Expert to Visit Ethiopia →
One thought on “OPDO keessa eenyufaatu jiraa”
Tame badasa December 6, 2019
Yaadaa baay’ee Bareeda fi ifa ta’e kan tokko tokko isa jalatti maal namoota tarreessuun danda’amuudha galatoomi